सगरमाथाको काखमा सडक - Sagarmatha Online News Portal
सोलुखुम्बु । चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लाको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकामा सडक पुग्ने भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं १ बुक्सासम्म चालू आवमा सडक पु¥याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सडक सञ्जालले नजोडिएको एक मात्र गाउँपालिका खुम्बुपासाङल्हामु यस वर्षदेखि सडकमा जोडिँदै छ ।
उनका अनुसार माप्यदूधकोशी र खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा सडकको ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । ट्र्याक खोल्न दुई गाउँपालिकाले रु ३९÷३९ लाख लगानी गर्ने सहमतिपत्र नै तयार गरेर काम अघि बढाइएको छ । रकम अपुग भए पुनः खर्च विवरणअनुसार दुवै गाउँपालिकाले बराबरी लगानी गर्ने सहमति भएको माप्यदूधकोशी गाउँपालिका प्रमुख बुद्धिकिरण राईले जानकारी दिए । विकास निमार्णमा दुई गाउँपालिका एक भएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको उनको भनाइ छ । सरदमुकाम सल्लेरीदेखि ३० किलोमिटरमा रहेको माप्यदूधकोशी–२ अँधेरीसम्म यसअघिनै सडक पुगिसकेको थियो भने वडा नं. १ हुँदै खुम्बुपासाङल्हामुको वडा नं. १ को बुक्सासम्म ४० किलोमिटर सडक यस वर्ष निर्माण गरिनेछ । लुक्लासम्मको बाँकी करीब ३० किलोमिटर सडक आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने प्रवक्ता शेर्पाले जानकारी दिए ।
त्यहाँको मौसम र पर्यटकको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदा लुक्लाभन्दा माथि सवारीसाधनमा पुग्नु उपयुक्त नहुने आरोहीको भनाइ छ । हिमशृङ्खलाको दृश्यावलोकनका लागि समेत लुक्लादेखि पैदलयात्रा उपयुक्त हुने हुँदा सडक निर्माणमा सोहीअनुसार ध्यान दिन आवश्यक रहेको सगरमाथा आरोही किताबसिं तामाङको भनाइ छ । सगरमाथा क्षेत्रको साख जोगाउन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने आरोही तामाङले बताए । लुक्लादेखि सगरमाथा आधारशिविर पुग्न पर्यटकका लागि सात क्याम्प आवश्यक रहेको छ । लुक्लाबाट शुरु भएको पदयात्रा फाग्दिङ, नाम्चे, तेङ्बोचे, दिङबुचे वा फेरुचे, लुबुचे, गोरप्सेपदेखि आधार शिविर पुग्छ । सगरमाथा आधार शिविरबाट अधिकांश पर्यटक फर्कन्छन् भने केही आरोही सगरमाथाको शिखरतर्फ लाग्छन् ।
अधिकांश पर्यटकको रोजाइ सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्र पर्छ । जसको मुख्य कारण हो, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित दर्जनौँ हिमाल एवं हिमशृङ्खला । वर्षको दुई ‘सिजन’मा विभिन्न राष्ट्रका हजारौं नागरिकले यस क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, नजिकैबाट सगरमाथा हिमालसहित यहाँको अन्य मनोरम वातावरणको दृश्यावलोकनले अधिकांशको ध्यान तान्ने गरेको छ । विशेषगरी ‘स्प्रिङ’ र ‘विन्टर’ सिजनमा पर्यटकको भीड लाग्ने यस क्षेत्रमा मौसम राम्रो हुँदा बाह्रै महीना पर्यटकको चहलपहल हुने गरेको छ । खुम्बु क्षेत्रका लागि काठमाडौंदेखि हप्ता दिनको पैदलयात्रा या तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल दुई माध्यम रहेको छ । अधिकांश पर्यटकको समय छोटो तर खुम्बु भ्रमणका लागि समय केही लामो भए प्रभावकारी हुने हुँदा हवाईमार्ग अधिकांशको रोजाइमा पर्छ तर, मौसम प्रतिकूल हुँदा हवाईसेवा प्रभावकारी हुँदैन ।
विदेशी पर्यटकका लागि त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लुक्लाको दुईतर्फ भाडा ३६० अमेरिकन डलर रहेको छ । हिमालयन जोइ एडभेन्चर प्रालिका प्रमुख कार्कीले भने, ‘एकातिर सडकमार्गमा करीब ६० डलरले आउनजान पुग्छ, भने अर्को्तिर यात्राको टुङ्गो पनि भयो ।’
हवाइ उडानसहित खुम्बु भ्रमणमा आउने पर्यटकलाई उडान रद्द हुँदा कुनै विकल्प नभएपछि पदप्रदर्शकलाई समेत समस्या हुने गरेको छ । ‘विमानस्थलको विकल्पमा केही पर्यटकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने भए पनि अति महङ्गो हुने हुँदा पर्यटकलाई समस्या हुन्थ्यो,’ पदप्रदर्शक किताबसिं तामाङले भने, ‘मौसम प्रतिकूल हुँदा हामी पदप्रदर्शकलाई तनाव, विदेशीको ‘टाइम टु टाइम’ हुन्छ ।’ पटकपटक उडान रद्द हुँदा काठमाडौंबाट खुम्बुका लागि आउने पर्यटकले भ्रमण क्षेत्र परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । हाइस्प्रिट ट्रेक्स एण्ड एक्सपिडिसन नेपाल प्रालिका सञ्चालक शिवबहादुर बस्नेतका अनुसार पर्यटकको योजनामा उडान नहुँदा ट्रेकिङ कम्पनीलाई निक्कै गाह्रो हुने गरेको छ । सडकमार्ग सञ्चालन हुँदा पर्यटक, पथप्रदर्शक र ट्रेकिङ कम्पनीलाई समेत सहज हुने बस्नेतको भनाइ छ । खुम्बु आउने पर्यटकले अबको एक वर्ष्भित्र मौसमकै कारण कुनै पनि समस्या झेल्नु नपर्ने खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका उपप्रमुख टासील्हामु शेर्पाले बताए। ‘यो वर्ष बुक्सासम्म पुग्छ,’ उपप्रमुख शेर्पाले भने, ‘अर्को वर्ष हामी गाउँपालिका केन्द्र चौँरीखर्क पुर्याउँछौँ ।’
Published On: ८ चैत्र २०७५, शुक्रबार 202पटक हेरिएको